La dagaallanka saboolnimada: Cameroon waxay maalgelin ka heleysaa 100 bilyan F oo ka socota Ururka Caalamiga ah ee Horumarinta - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »La dagaallanka saboolnimada: Cameroon waxay maalgelin ka heleysaa 100 bilyan F ee Ururka Caalamiga ah ee Horumarinta
La dagaallanka saboolnimada: Cameroon waxay maalgelin ka heshaa bilyan Million F ee Ururka Caalamiga ah ee Horumarinta
Maalgelintan waa in loo isticmaalaa dibuhabaynta waxbarashada.
Tuesday Last, Wasiirka Dhaqaalaha, Qorshaynta iyo Horumarinta Gobolka (Minepat) Ousman Mey Alamine saxiixay afar heshiisyada maalgelinta la ah Agaasimaha Hawlgallada ee Elisabeth Baanka Adduunka Huybens oo qayb ka ah Ururka Ururka Horumarinta Caalamiga (Ida). Waayo, kuwaas oo afar heshiisyada, Cameroon maalgelin ka 100, 7 bilyan oo faran CFA helo.
Waxaa la sheegay in maaliyaddan loo qaybiyey mashruuca shabakadda badbaadinta bulshada iyo mashruuca Taageerada Waxbarashada Dib-u-habeynta Waxbarashada (PARE). Mashruuca nabdoonaanta bulshada ee mashaakilaadka la dagaallanka saboolnimada ba'an. Heshiiska Talaadada, waxay ka faa'iideysan doontaa baqshad dheeraad ah ee balaayiin 35 ee Fcfa. Kala badhka qadarkan waa hadiyad, tan kalena waa deyn. Wixii sheeko yar yar ee mashruuca ayaa lagu aasaasay 2013.
Waxa ay u ogolaataa qoysaska aad u liita ay u daboolaan baahidooda loo marayo kala iibsiga lacag caddaan ah iyo hawlaha guud xoojinta shaqada sare meelaha sida Waqooyi Galbeed, Koonfur iyo Waqooyi Fog laakiin qaar ka mid ah degmooyinka ku yaal magaalooyinka reer Yaounde oo Douala. Iyada oo deeq dheeraad ah, waxa ay ballaarin doonto gobollada kale iyo degmooyinka marti qaxootiga.
Marka laga hadlayo Pare, waxa uu leeyahay bashqad ku saabsan ku dhawaad ​​bilyan Million F. Lacagta ayaa u oggolaanaysa qorista macalimiinta qandaraaska 75,6 12 ee asaasiga ah. Lacagta ayaa u oggolaan doonta "Kordhinta wax soo saarka qoysaska 42 000 oo fududeynaya helitaanka shaqo xoog leh oo loogu talagalay dadka 23000 oo ay ku jiraan qaxootiga 8500".
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/14/lutte-contre-la-pauvrete-le-cameroun-recoit-un-financement-de-100-milliards-de-f-de-lassociation-internationale-pour-le-developpement/
WAXYAABAHA: 26 WAX KA BADAN YIHIIN WAX KA BADAN YAHAY HADDII AAD U BAAHANTAHAY